Cellulite တိုက်ဖျက်နည်း - အမျိုးသားများတွင် cellulite ဖယ်ရှားနည်း | စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 31/10/2021 20:21 | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, fit, အသုံးပြုနိုင်မှု, ကျန်းမာခြင်း
ပျော်ရွှင်သော cellulite သည် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော အဆီဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ ထိခိုက်ပါတယ်။ ယင်းသည် အဓိကအားဖြင့် အမျိုးသမီးများနှင့် ပိုမိုသက်ဆိုင်သည့် အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခံစားရနိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။ဒါပေမယ့် တူညီစွာ ခံစားနေရတဲ့ အမျိုးသားတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ဤအချက်ကို ထောက်၍ ၎င်းတို့သည် ၎င်းသည် အဘယ်အရာနှင့် cellulite ကိုမည်ကဲ့သို့ တိုက်ဖျက်ရမည်ကို အံ့သြကြသည်။
ဒါက cellulite ပါ။ အဆီ nodules များတည်ဆောက်ခြင်း။ ထိုကဲ့သို့သောနေရာများတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် စုစည်းမှု သို့မဟုတ် စုပုံနေပါသည်။ ခြေထောက်၊ တင်ပါး သို့မဟုတ် ဝမ်းဗိုက်။ ဤနေရာများသည် ကိုယ်အလေးချိန်တက်ရန် အားနည်းလာပြီး မကြိုက်သောကြောင့် သင်မကြိုက်သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အနီး အမျိုးသားတွေရဲ့ 10% ဟာ ဒီရောဂါကို ခံစားနေရပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ ခံစားနေရတာက သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အီစထရိုဂျင် အများအပြားနဲ့ အများကြီး သက်ဆိုင်ပါတယ်။
1 cellulite ဆိုတာဘာလဲ။
2 အမျိုးသားများသည် အဘယ်ကြောင့် cellulite ခံစားရသနည်း။
2.3 Cellulite ကို ဘယ်လို တိုက်ဖျက်မလဲ ။
၎င်းတို့သည် အဆီဖုများဖြစ်သည်။ အရေပြားအောက်တွင် အဖုအထစ်များ သို့မဟုတ် ပါးချိုင့်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ "လိမ္မော်ခွံ" ဟုခေါ်သည်။ အဆီဖုများ ရောင်ရမ်းလာပြီး မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သော သေးငယ်သော ပမာဏကို သိသိသာသာ ထုတ်ပေးပါသည်။ အမျိုးသမီး ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် ယင်းရောဂါကို ခံစားနေကြရသည်။
အမျိုးသားများသည် အဘယ်ကြောင့် cellulite ခံစားရသနည်း။
အမျိုးသားများသည် cellulite ရရှိကြသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့် မတူပါ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတာ မသိရပေမယ့် အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ လူနေမှုပုံစံ၊ အစားအသောက်၊ မျိုးရိုးဗီဇ သို့မဟုတ် ဟော်မုန်းပါဝင်မှု။
ဤအချက်ပေါ်လာရန် သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ပြည့်ဝဆီ ကြွယ်ဝသော အစားအစာ သို့မဟုတ် သန့်စင်ထားသောသကြားများ ပမာဏမြင့်မားခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ပြန့်နှံ့မှုကို အရှိန်အဟုန်မြင့်လာစေမည်ဖြစ်သည်။ အခြားအလေ့အထများကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်မှာ အရက်သောက်ခြင်းဖြစ်သည်၊ မြင့်မားသောကယ်လိုရီအရေအတွက် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း။
၎င်းသည် cellulite ဖွဲ့စည်းရန်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် ကြာကြာနေရန် အဓိကနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်က လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ရင် ကယ်လိုရီတွေ အကုန်အကျခံမှာမဟုတ်သလို ကယ်လိုရီလည်း မကုန်ပါဘူး။ အဆီအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲကြသည်။. ထို့အပြင်၊ အထိုင်များသောလူနေမှုပုံစံသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ပြဿနာများစွာနှင့် မရေမတွက်နိုင်သော ရောဂါများကို ဖြစ်ထွန်းစေသည်။
အများကြီးလွှမ်းမိုးတဲ့ နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုခန္ဓာကိုယ်က ဟော်မုန်းတွေ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်နေလို့ သင့်သွေးလည်ပတ်မှု ချို့ယွင်းခြင်း၊ ထို့ကြောင့် အရည်ထိန်းခြင်းသည် ရှိနေပြီး အဆီ၏ အသွင်အပြင်ကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဒီပြဿနာကို အဓိက ခံစားရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အီစထရိုဂျင်နှင့် ဆက်စပ်မှု မညီမျှခြင်း။. မျိုးရိုးဗီဇအရ၊ မျိုးရိုးဗီဇအချက်သည် ကြီးမားသောအစပျိုးမှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အလားတူပင် အစက်ချခြင်းလည်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ Cellulite အမျိုးအစား သို့မဟုတ် ပေါ်လာသည့်နေရာသည်လည်း အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Cellulite ကို ဘယ်လို တိုက်ဖျက်မလဲ ။
ပေါ်လာနိုင်တဲ့ cellulite သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ သုံးယောက် ရန်ဖြစ် သည်။. အမျိုးသားများ၏ အရေပြားသည် အမျိုးသမီးများထက် များစွာ ပိုထူသည် ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်း၏ မြင်နိုင်စွမ်းကို ပိုမို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည် ။
အဆိုပါစံပြဖြစ် တက်ကြွသောဘဝကို ဦးဆောင်ပါ။ငါဘယ်မှာသိလဲ။ အားကစားလုပ်ပြီး ကြွက်သားတွေကို သန်မာစေတယ်။. အဆီ၊ သကြားနဲ့ အရက် ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေက တွန်းလှန်ပေးပြီး ရှိနေတဲ့ cellulite ကိုတောင် ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ မင်းမှာ သတ္တိမရှိရင် အကောင်းဆုံး ရည်ရွယ်ချက်က မင်းကိုယ်မင်း ထားဖို့ပဲ။ အထူးကုနှင့်အာဟာရပညာရှင်၏လက်၌။ ၎င်းသည် သင့်အား အကောင်းဆုံး အစားအစာများကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် သင့်အား လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုနှင့် သင့်လူနေမှုပုံစံအပေါ် မူတည်၍ တစ်ကိုယ်ရည် စားသောက်မှုနှင့်အတူ သင့်အား ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ယူဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်ကို မြန်ဆန်စေပြီး ခွဲစိတ်စရာမလိုသော ကုသမှုများရှိပါသည်။ အဲဒီထဲက တစ်မျိုးကတော့ အမျိုးသမီးတွေ သုံးပါတယ်။ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း၊ ကော်လာဂျင်ကို လှုံ့ဆော်ရန်အတွက် အပူကို အသုံးပြုသည်။ ဤအပူသည် အကြိမ်များစွာကြာပြီးနောက် cellulite ပြိုကွဲစေရန် ကူညီပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကူညီပေးပါမည်။ အသားအရေတင်းမာဖို့။ တိုးတက်မှုကို သတိပြုမိစေရန်အတွက် အနည်းဆုံး 10 sessions လိုအပ်ပါသည်။
Mesotherapy ၎င်းကို အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုနေပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သော ရလဒ်များကို ပေးသည်။ အကြောင်းဖြစ်သည် အမျိုးမျိုးသောဒြပ်ပစ္စည်းများ၏မိုက်ခရိုထိုးဆေး၎င်းတို့တွင် ဆေးဖက်ဝင်သော အဆီဖုများ ပြိုကွဲစေရန် ကူညီပေးသည်။
ယောက်ျား ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ အလားအလာ မြင့်မားပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေထက် ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ အပြောင်းအလဲများကို သတိပြုမိစေရန် တစ်ပတ်လျှင် သုံးကြိမ်မှ လေးကြိမ် လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စတင်နိုင်ပါသည်။ ခြေထောက်များကိုခိုင်ခံ့စေခြင်း။ သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းစေရန် လမ်းလျှောက်ပါ။ ဝမ်းဗိုက်က အဆီတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် အကြံပြုလိုပါတယ်။ ရေကူးသွား. Cardio သည် ခန္ဓာကိုယ်၏ သွေးလှည့်ပတ်မှုအားလုံးကို တက်ကြွစေမည့် အဓိကလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပြီး သင့်အား ခန္ဓာကိုယ်၏ အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးကို ချောမွေ့စေရန် ကူညီပေးမည့် အလွန်ပြီးပြည့်စုံသော အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
အမျိုးသားများတွင် cellulite ဒါဟာ အမြင်မတော်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။သို့သော် ၎င်း၏ တည်ရှိမှုသည် အဆမတန်မရှိသည့်အခါ ပြဿနာမဟုတ်ပါ။ နိယာမအနေဖြင့်သာ ၎င်းသည် သွေးလည်ပတ်မှုပြဿနာ အမြဲရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး၊ မကုသပါက အခြားဆက်စပ်ပြဿနာများအပေါ်တွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု » cellulite ကိုဘယ်လိုတိုက်ဖျက်မလဲ။
ငါ့မှာ frenulum အတိုရှိမရှိ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။